आईपीएल २०१९ मा ८ करोड ४० लाखमा बिक्री भएका चक्रवर्ती को हुन् ? - Radio Unity 92.2MHzRadio Unity 92.2MHz
आईपीएल २०१९ मा ८ करोड ४० लाखमा बिक्री भएका चक्रवर्ती को हुन् ?
काठमाडौँ,पुस ४ । इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलको अक्सनमा २ जना खेलाडी सर्वाधिक महंगो मूल्यमा बिक्री भएका छन् ।दुवै जना भारतीय क्रिकेटर हुन् ।राजस्थान रोयल्सले जयदेव उनादकटलाई सर्वाधिक रकम तिरेको छ । गएको संस्करणमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा २९ औँ स्थानमा रहेका थिए ।
उनले प्रतियोगिताभर ११ विकेट लिएका थिए । उनादकटको न्यूनतम मूल्य १ करोड ५० लाख रहेकोमा अक्सनमा सबैले बोली लगाएपछि राजस्थानले ८ करोड ४०लाख खर्चिएर किनेको हो ।उनादकटलाई सन् २०१७ को आईपीएलको अक्सनमा ११ करोड ५० लाखमा राजस्थानले नै किनेको थियो ।
यसैगरी किंग्स इलाभेन पञ्जाबले वरुण चक्रवर्तीलाई पनि ८ करोड ४० लाख खर्च गरेको छ । अनक्याप्ड खेलाडी चक्रवर्तीको न्यूनतम मूल्य २० लाख राखिएकोमा उनीमाथि पनि सबैले बोली लगाएका थिए । सुरुमा दिल्ली र चेन्नईले उनलाई किन्न खोजेका थिए । त्यसपछि कोलकाता र पञ्जाबले पनि लिलामीको रेसलाई दौडाएका थिए । जसमा पञ्जाबले ८ करोड ४० लाखमा किन्न सफल भयो । उनले भारतीय टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाएका छैनन् ।
तर उनले घरेलु प्रतियोगितामा तमिलनाडुका लागि धेरै पटक चामत्कारिक प्रदर्शन गरेका छन् । तमिलनाडु प्रिमियर लिग खेलेका उनले धरै ठूला ठूला ब्याट्सम्यानलाई पेभेलियनको बाटो देखाएका थिए । तमिलनाडु लिगपछि विजय हजारे ट्रफीमा उनले ९ खेलमा २२ विकेट लिएर सनसनी मच्चाएका थिए । समूह चरणमा उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी बनेका थिए ।
अचम्मको कुरा के छ भने १३ वर्षको उमेरमा क्रिकेट करियर सुरु गरेका वरुण सुरुमा विकेटकिपर ब्याट्सम्यान थिए । यसैगरी उनले चेन्नईको एसआरएम विश्वविद्यालयबाट आर्किटेक्चर इञ्जिनियरिङमा स्नातक पास गरेका छन् । पढाई पूरा गरेपछि उनले ‘फ्रील्यान्सर’ भएर काम पनि गरे तर उनीमा क्रिकेटको मोह भंग भएन ।
क्रिकेटको क्रेज बढी देखेपछि उनी जागिर छाडेर यता आएका हुन् । सुरुमा फास्ट बलर बनेका वरुण चोट लागेपछि स्पिनर बने । त्यसपछि चेन्नई लिगमा जुबली क्रिकेट क्लबबाट खेले । त्यसमा उनले ७ खेलमा ३१ विकेट लिए भने ब्याटिङतर्फ शानदार हाफ सेन्चुरी बनाएका थिए ।यसैगरी पञ्जाबले शाम कुरानलाई ७ करोड २० लाखमा किनेको छ । इंग्ल्याण्डका कुरानको न्यूनतम मूल्य २ करोड तोकिएकोमा पञ्जाबले दोस्रो ठूलो रकम खर्च गरेको हो ।
दिल्ली क्यापिटल्सले कोलिन इन्ग्रामलाई ६ करोड ४० लाख खर्च गर्दा कोलकाताले कार्लोस ब्रेथ्वेटलाई ५ करोड खर्च गरेको छ ।यसैगरी पाँच करोड मूल्यमा दिल्लीले अक्षर पटेल, चेन्नईले मोहित शर्मा र बेंग्लोरले शिवम दुवेलाई पनि किनेका छन् ।
कञ्चनपुर,पुस १६ । भीमदत्त नगरपालिकामा जैविक धार्मिक पर्यटन मार्ग म्याराथन मार्च गरिएको छ । सुदूरपश्चिम